रहर (कथा) | मझेरी डट कम
editor — Tue, 04/18/2017 - 01:06
आइफोनको सेन्टरमा टोलाइरहेको मलाई देखेर उही सेन्टरीकी महिला लेड अंग्रेजीमा सोधिन्, "Sir, can I help you ?"
उसको कुराबाट म झसंग भएँ । महिना दिनको लामो निद्राबाट ब्यूँझिएजस्तै भयो । मन गह्रुगो भयो । बहिनीले पनि अस्ति फोनमा "दाइ हेएर स्टेट्र गर्नुछ । साथीले झिंग्रिएको बाल देखेर गिज्जाउछन्" भनेर भनेको सम्झिएँ । र मेरा कम्पनीको केही साथीहरूले पनि मेरो नोकिया मोबाइलको पनि मजाक उँडाएको सम्झिएँ ।
सेतो सिसापछाडि बैङ्कको कालोध्वाँसो मान्छे थियो । सायद कर्मचारी हुँदो हो, उसैनजिक गई भनें, "पैसा पठाउन छ नेपाल ।"
केही छिन computer छेडछाडपछि उसले भन्यो,"हो गया ।"
"सर आज जागया ना पैसै ?" भनेर हिन्दीमै सोधें ।
उसले पनि आँखाँ तर्काउदै भन्यो,"हाँ गया घरपे फोन करके पुछो ।"
मनिलो स्वर रून्चे बोलीमा अलिअलि चिनेको जस्तै आवज आयो । तर यही भनेर ठम्याउन सकिन । मैले सोधें,"हजुर को बोल्नुभएको ?"
"दादा म रितु बहिनी ।"
"अँ सानी के छ खबर ?"
मेरो कुरा सकिन नपाउदै भनी,"दादा बुवालाई मार्केटमा बाइकले ठक्कर दियो । ठक्कर दिने चालक पनि भागेछ । हस्पिटल लिएर आएका छौं । जबसम्म काउन्टरमा बिस हजार नेपाली जम्मा हुदैन तबसम्म इमरजेन्सी सेवा भर्ना गर्न नमिल्ने भनेको छ । आमाको तिलौरी राख्दा पनि डाक्टरले यो सुनवारको थलो होइन, सक्नुहुन्छ चाँडो पैसा जम्मा गर्नुस नाई त जे पनि हुन सक्छ भनेर भनेका छन् डाक्टरले । दादा म के गरुम केही सोच्न सकिन धन्न हजुरको नम्बर याद थियो । त्यसैले साथीको फोनबाट फोन गरेको ।"
म छाँगाबाट खस्न पुगे, मन धेरै पोल्यो बहिनीको कुराले । डाक्टर ती चालक सम्झेर रिस पनि उठयो र केही गर्न साथमा थिएन । बहिनीलाई सम्झाउदै भनें,"नआत्ती सानी पैसा राखिदिएको छु बुबाको एकाउन्टमा गएर झिक् र भर्ना गर् । अनि बुवा आमाको ख्याल गर् । म भोलि कल गर्छु ।"
दुई दिनपछि घरमा फोन गरे फोन बुवाको हातमा थियो । बुबाको आवाज कानले सुन्न नपाउदै आँखा रुन थाले । बुबाले पनि चाल पाउनुभएछ । "म ठिकै त छु घरकाले त रोएर पुरा गरे अब तँ पनि रोई," भन्नुभयो ।
"आँखाको रूने काम मनको दुख्ने काम के छेक्न सकिन्थ्यो र !" मैले बनावटी हाँस्दै भने ।
"केही भाको होइन । त्यसै यसो ढाड मड्किया मात्र रछ त्यसै यत्रो हल्ला," भन्दै बुवा पनि रुन लाग्नुभयो । "धन्न त थिइस् र बँचे ।"
झन बिसाएका आँखा साउने झरी जस्तै बर्सिन लागे । "घरमा मुसा मरेको समाचार सुन्दा परदेशमा रहेको छोराको आँखामा आँशु आउँछन् भने तपाई जन्मदाता बुवा कसरी सम्हाल्नु मन् !" बुवालाई भने ।
दश दिरामको रिर्चाजले केबल पाचमिनेट मात्र कुरा हुन्थ्यो । फेरि फोन टुइट्-टुइट् आवज आउन थाल्यो । भनें,"बुवा फोन राखिदिन्छु, ख्याल गर्नुहोला ।"
दुई मुक्तक (हिमालदेखि, फूल फुल्छ)
त्याे सेताे क्यानभास
झरी फेरि दर्किन थाल्यो
जिन्दगीको सौदाबाजी, गर्दैछु किन म